GUNDHIGA AASAASIGA AH EE CASHUURAHA
Sunday 2nd January 2022 12:03:03 in Aragtida Dadweynaha by Xarunta Guud
I.Si ay dawladda u hesho dakhli – hanti lacageed, oo ay ku maamamusho, ku socodsiiso, kuna maalgaliso maasuliyadaheega.
II.Si loo koobo kala tagsanaanta heeynta bulshada (income inequality) ama dib loogu qaabeeyo (redistribute) heeynta bulshada, iyadoo dawladdu kuwa hantida badan iyo kuwa lacagta badan soo gasho ku waajibinaaysa cashuur badan, kuwa heeyntoodu aanay wanaagsaneeyna saaraaysa cashuur yar.
§Lacagtaa soo xarootay, dawladdu waxay ku maalgalisaa dhisintaanka iyo dayactirka iskuullada, dhakhtarada, ceelasha, wadooyinka, goobaha ganacsi, guryaha dawladda, IWM ee danguud ah. Ujeedkuna waa in dadka heeyntoodu yartahay ay helaan adeegyo iyo wax-soosaar dawladeed oo bilaash ah ama ka jaban kuwa gaarka ah, maadaama kuwa ladan lacagtooda ku helayaan baahiyaadkooda.
III.Si loo dhimo isku dheelitirnaan la’aanta goballada ama degmooyinka: Sida caadiga ah, waxa kira goballoama degmooyin dhaqaalahoodu wanaagsanyahay, cashuur badana ka soo xarooto iyo goballo ama degmooyin uu dhaqaalahoodu liito, cashuur badana aanay ka soo xaroon. Sida darteed, si dawladdu goballada ama degmooyinka isuugu dheelitirto, waxay kuwa dib-u-dhucu ka jiro si gaar ah uga taageertaa bixinta iyo joogteeynta adeegyada dawliga ah iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha, si aanay uga dib dhicin horumarka guud ee dalkaa ka socda. Waxa kale oo ay dawladdu kuwa dhaqaalahoodu liito u sameeysaa kharashaad cashuureedyo (tax expenditures) u gooni ah – cashuur dhimis iyo cashuur dhaafyo, ilaa heer ganacsiga iyo dhaqaalaha degmoyinkaasi soo kobcayo.
§ Tusaale: Gobalada bariga (sool iyo sanaag) miisaaniyadda waxa ugu jirta 2% iyaga u gaar ah oo loogu talo gallay horumarinta gobaladaa. Waxa kale oo jirta in degmooyin gobaladaa ka tirsan aan wax cashuur ah laga qaadin, qaarkoodna cashuurta laga khafiifiyo.
Sidaan hore u sheegnay cashuurtu abuur ahaanwaa culeeys. Qof katena wuu jeclyahay in laga dhimo ama laga dhaafo cashuurta ku waajibtay. Sidaas oo ay tahay, hadana waxa jira dhawr talaabo oo hadii ay dawladdu qaaddo, dadku ku qancaan culeeys kaste oo ay cashuurtu leedahay. Talaabooyinkaas waxa ka mid ah:
ØIn bulshada iyo hantidoodaba loo cashuura si ka turjumeeysa dakhligooda iyo qiimaha hantidooda, oo aanqiime (value) iyo xadi (rate) isku mid ah laga qaadin, bedelkeedase qof kaste ama ganacsi kaste laga qaadayo qiime iyo xadimiisaan ahaan u dhigma dakhligiisa iyo hantidiisa. Iyadoo laga duulayo awooda bixinta.
ØIn cashuurta lagu celiyo bulshada, iyada oo mashaariic iyo adeegyo cusub loogu soo kordhinayo. Waxa kale oo iyaduna muhiim ah in dayactir, dib-u-habeeyn iyo horumarin lala daba joogo kuwii hore iyo kuwa cusubba, si bulshadu u dareento waxtarka lacagta ay bixiyaan.
Ø In la keydiyo in ka mid ah cashuurta soo xaroota. Si marka dhibaatooyin dhacaan ama baahiyo degdeg ahi soo baxaan loo isticmaalo keeydkii la hayay.Ujeedkuna waa in aan bulshada markaste loo baahan.
Ø Marka la casriyeeyo, lana tayeeyo nidaamka cashuur-qaadista, iyadoo la abuurayo hanaan cashuur-qaadis oo daah-furan ama ban-yaal ah. Waana in qof kaste ama ganacsi kasteba saadaalin karo, garana karo cashuurta ku waajibaaysa.
Ø Marka meesha laga saaro kharashaadka dawladda ee aan muhiimadda badan laheeyn, lagana maarmi karo, kuwa muhiimka ahna in sida ugu macquulsan loo kharash-gareeyo.
ØMarka ay jirto masuuliyad dawladeed oo bulshadu la xisaabtanto, taasi oo bulshada u sharaxda meel-kaste oo shilinkoodu ku dhacay ama waxa loo qoondeeyey. Marka qorshaha ama odoroska la sameeynayana waa in bulshadu qeeyb ka ahaataa ama lala socodsiiyaa sida loo isticmaali doonno cashuurta ay soo xareeynayaan.
I.Cashuuraha ku dhaca dakhliga iyo kharashaadka.
II.Cashuuraha ku dhaca hantida iyo kala wareejinta hantinda.
III.Cashuuraha ku dhaca Alaabta iyo Adeegga.
B. Cashuuraha Toosan: cashuurahani waxay sitoos ugu waajibaan cashuur-bixiyaha, culeeyskooduna bulshada uma gudbo. Cashuurahan waxay ku dhacaan dakhliga, kharashaadka iyo hantida, waxayna waajibaan marka dakhliga ama hantidu soo gasho gacanta qofka. Waxana ka mid ah;Cashuurta Mushaharka(payroll tax); Cashuurta Macaashka ama Dakhliga Ganacsiga iyo Daaraha (bussiness/profit/income tax); Cashuurta Macaashka Shirkaddaha Waaweyn (corporate tax); Cashuurta Ardiyada –dhismaha iyo dhulka– (property tax); Cashuurta Kiradda daarta/dhulka (rental tax); Cashuurta Wado-marista (Road Tax); iyo Cashuurta Kala-warejinta Hantida–marka iibku dhaco–(transfer tax).Marka laga reebo Cashuurta Kala-wareejinta,cashuuraha kale waa kuwa xiliyeeysan. Tusaale: sanadle, bile, IWM.
Ø Cashuurta Kastamka/Furdada(customs duty): Waa cashuurta ku dhacda alaabaha iyo adeegyada soo gallaya ama ka baxaya dalka. Cashuurtan waxa bixiya qofka/meherada alaabta/adeegga dalka keena, dabadeed lacagta cashuurta wuxu ku darsadaa kharashka ka baxay, markaas buu qimaha uu ka macaashayana saartaa, dabadeedna dadka ka iibiyaa. Sidaas awgeed, culeeyska cashuurtani waxay kortaa oo bixiya qof kaste oo alaabtaa ama adeeggaa iibsada.
Ø Cashuurta Isticmaalka (consumption tax):
ü Cashuurta Iibka: waxay waajibtaa marka qofku alaab ama adeeg iibsanaayso ––Cashuurta Gadista (sales tax); Cashuurta Iibka Alaabaha iyo Adeega (goods and service tax GST); Cashuurta Qiime Koradhka (value added tax VAT)–– Culeeyska cashuurtani wuxu u gudbaa oo bixiya qofka alaabta/adeegga iibsnaya. Qof iibinayana wuxu ka masuul yahay in uu iibkaste oo uu sameeyo cashuurta saaro, isagaana dawladda u qabta, una xereeya.
ü "Excise Tax”waacashuur la saaro alaabaha iyo adeegyada dhibaatada ku ah bulshada ama deegaanka, si loo yareeyo ama bulshada looga niyad jabiyo isticmaalka alaabtaas ama adeegaas. Waxa kale oo cashuurtan la saaraa alaabaha qaaliga ah, kuwaas oo qiime kaste oo la siiyo dalabkiisu aanu is bedellin. [Tusaale: tigidhka diyaaradaha]. Culeeyska cashuurtanina wuxu u gudbaa oo bixiya bulashada isticmaalaaysa.
ü Cashuurta Masuuliyadda Dheeriga ah (Exteneded Producer Responsibility "EPR Tax”). Cashuurtani waa hawl-gal siyaasi ah (policy approach) oo lagu dabaqo warshaddaha dalka iyo ganacsatada alaabaha soo dhoofisa. Cashuurtan waxa lagu waajibiyaa "alaabaha” warshadduhu soo saaraan ama ganacsatadu soo dhoofiso, kuwaas oo hadhaagoodu aanu faa’ido danbe u laheeyn bulshada, deegaankana dhibaato ku abuurayo. Lacagta cashuurtan ka soo xarootana, dawladdu waxay u qoondeeysaa maareeynta iyo tirtirida khasinkaas. Hadii ay dalka ka jirto warshad dib u sanceeysa (recycling) hadhaagaas, lacagta cashuurtaas ka soo xaroota waxa loo qoondeeyaa in la siiyo cida soo ururisa hadhaaga ee warshadda geysa.Culeeysku cashuurtanina wuxu u gudbayaa oo bixiya bulashada isticmaasha alaabtaas.
üCashuurta Moorka ama "Tastiiqinta” (stamp duty): asalkeedu waxay ka timiday shaanbad lagu xaqiijinayo ama sharciyeeynaaysa saxnimada qaansheegta wax lagu kala iibsaday ama lacagta lagu bixiyey. Qofka wax iibsanaya ama lacagta bixinaya ayeeyna kortaa.
Ø Cashuurta kastamka: cashuurtan eray aqooneedkeedu waa Waajibka Kastamka (customs duty), waxayna ku waajibtaa alaabta xuduudaha dalka ka soo gasha ama ka baxaysa. Alaab dalka gudihiisa taala kuma waajibto. Si guud, waxa laga soo dhiraandhiriyaa kharashaadka ku soo baxay alaabta ilaa inta dalka la keenayay, oo ku cad qaansheegaha ganacsiga (commercial invoice) ee qofku wato, taasi oo ka dhigan qiimaha (value) alaabtaasi taagantahay, dabeedna waxa lagu dhuftaa, xadiga (rate) dalkaasi u qoondeeyey in alaabtaa laga cashuuro. Dabeed maxsuulka soo baxa ayaa la yidhaa Waajibka Kastamka (customs duty).––Somaliland, maadaama ganacsatadu aanay keenin qaansheegtooda ganacsi (commercial invoice), qiimaha (value) shayga iyo xaddiga (rate) laga cashuurayaba waxa ay ku yaalaan buugga tacriifadda––
Ø Cashuuraha Tooska ah: dhamaantood waa Cashuuro Barri. Waxayna ku waajibaan dakhli, hanti ama kharash dalka gudihiisa yaala.
Ø Cashuurahaisticmaalka(consuption taxes): sida caadiga ah, waxay waajibaan marka alaabta dalka gudihiisa soo gasho. Sidaa darteed waa Cashuuro Barri. Balse way dhici kartaa in ay dhabarka laga saaro (piggybacking), cashuurta waajibka kastamka, iyaguse si iskood ah uguma dhacaan alaabta kastamka soo galaysa am aka baxaysaa, ilaa ay dusha ka koraan waajibka kastamka mooyaane. Sidaa darteed, maadaama ay isticmaalka shayga ku waajibayaan asalkoodii waxba iska beddeli maayaan, ee Cashuuro Barri uun bay ahaanayaan.
Intaa waxa dheer oo iyaduna jirta cashuur la yidhaa "Cashuurta Dheeriga ah” (sur tax), cashuurtan waxa la waajibiyaa marka dalka dhaqaalihiisa hoos u dhac ku yimaado iyo marka xaaladdo dabiici ah ama dagaallo ku soo noqnoqdaan dalka, si looga hortago in dheeli ku yimaado miisaaniyadda dalka. Cashuurtan marka la waajibinayo waxa loo xanbaariyaa (piggypacking) maxsuulka cashuurta lagu rarayo/marayo, iyadoo loo eegayo in dakhli badan ka dhalan-karo iyo in aanay culeeys aad ah ku kordhineeyn bulshada inteeda badan. Markaa, qeeybta ay cashuurtani ku biiraayso waxay ku xidhantahay hadba cashuurta loo xambaariyo.
F.G: dhamaanCashuuraha Dawladdaha hoosewaxay xisaabsanyihiinCashuuro Barri.
ØMarka la jooggo Cashuuraha Toosan;
üNidaam cashuureedkan inta badan waxa loo adeegsadaa Cashuurta Macaashka ee Shirkaddaha Waaweeyn (corporate tax), marka la rabo in shirkaddaha waaweeyn ka qeeyb-qaataan koradhinta dakhliga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Waana nidaam siyaasadeed lagu kordhiyo shaqo-abuurka iyo wax-soosaarka dalkaas; shirkaddaha waaweeyn lacagta uga baaqata cashuurta, maalgalin cusub ayeey ku sameeyaan. Cashuurta ka soo xaroon doonta shaqaalaha, wax-soosaarka iyo macaashka cusub ee shirkadduhu wuxu dawladda u bedelaa cashuurtii shirkaddaha laga dhimay, mararka qaarna cashuur ka badan tii la dhimay baa ka soo baxda.
ØMarka la jooggo Cashuuraha dadban:
Dakhliguwaa isku-darka lacagaha u soo xarooda dawladda. Lacagahaas waxa ugu muhiimsan kuwa ay dawladdu qaado oo ay ugu mudantahay cashuurtu. Lacagaha kale ee ay dawladdu qaadana wax aka mid ah, khidmadda/lacagta qofku bixiyo si uu u helo ama u isticmaalo adeeg, alaab ama wax-soosaar dawladdu leedahay (fee/user charge); lacagta qofku bixiyo si loo siiyo shati uu ku hawl-gallo (licence fee); lacagaha ka soo xarooda ganaaxyada, ciqaabaha iyo takhsiiraha dawladdu jideeyso (fines and penalties). Intaa waxa dheer oo dakhliga dawladda ka mid ah; lacagaha lagu caawiyo, kuwa la siiyo, kuwa ay deynsato ama la deymiyo; daabicidda lacagta cusub ee dawladda; iyo lacagaha ka soo xarooda hantida dawladda ee la iibiyo.
Kharashkunawaa habka ay dawladdu u bixiso ama u isticmaasho dakhligeega, iyada oo ku maareeynaaysa masuuliyadaheega. Kharashaadka dawladdu gasho ama bixisana waxa loo qeeybiyaa labo qeybood oo waaweeyn;
"400 SLSH Ayaa Laga Qaadayaa Maalin Kasta Tagaasida Yar-Yar Ee Hargaysa" Gudida Dacwadaha Cashuuraha+[Muuqaal]
Isbarbardhiga Cashuuraha Somaliland, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda & Noocyada Cashurta [ Muuqaal]
[DEG DEG:-] War-saxaafadeedka Cusub Ee Madaxtooyada Somaliland Ka Soo Baxay Iyo Qodobada Xaasaasiga Ah Ee Ku Jira
Golaha Wakiiladda Somaliland Oo Ka Dooday Xeerka Shirkadaha Aaga Cashuuraha Ka Caagan [ Muuqaal ]
[Daawo Live:] Khubaddii Madaxweyne Muuse Biixi, Farriimaha Culus Ee Uu Soomaaliya Iyo Muqdisho U Diray Xogaha Xaasaasig
"Dal-na Uma Adeegsan Karo Xanuunka COVID-19 Inuu Ku Xadgudbo xoriyadaha Aasaasiga Ah" Maraykanka.
Hordhaca Waraysigii Xaasaasiga Ahaa Ee Afhayeenka Madaxweyne Biixi Iyo Siriha Ku Wareegsan
Wasiirka Maaliyadda Somaliland Oo Tababbar U Furay Qaar Ka Mid Ah Waaxda Cashuuraha Ee Wasaaraddaasi [ Muuqaal ]
Golaha Wakiiladda Somaliland Oo Ka Dooday Xeerka Aaga Cashuuraha Ka Caagan Iyo Qodobada Miiska Saaran [ Muuqaal ]